New iPhone 4S — MYSTERY ZILLION
October 2011 edited October 2011 in iPhone
They announced iPhone 4S will deliver on October 14.
- Dual Core A5 Chip
- iOS5 and iCloud
- Siri (you can order your phone with your voice)
October 2011 edited October 2011 Registered Users
Dear Mg Day,
If you wanna get, I'll order for you.
But, you have to pay service charge.
How much fri...? And how we can order it...? If we order you, can you sign our name @ the back of iPhone?
Sea Prince wrote:
I also want my name at the back of iphone. Good idea.
I want to order official unlock iPhone 4s black 32GB.How much is this?If you can,
sendamessage to me,please.My email is [email protected]
သူပြောချင်တာက ဖုန်းကို ပါးစပ်နဲ့ပြောနိုင်တယ်လို့ ပြောတာဟ အဟိ
၂၀၁၃ ကျမှ ဝယ်တော့မယ်နော်
Applestore မှာ Sim-free တွေရောင်းတယ်... ဆိုင်မှာဝယ်လို့မရဘူးတဲ့... Online ကနေ ည ၉ နာရီမှာ reserve အရင်လုပ်... ပြီးမှ နောက်နေ့ဆိုင်မှာသွားထုတ်ရတာ... ကျွန်တော် reserve လုပ်တော့ ည ၉ နာရီအတိမှာလုပ်တာပါပဲ... ၉ နာရီထိုးတာနဲ့ applestore website က congestion ကြောင့် လုံးဝကျသွားပါတယ်... ၂ မိနစ်လောက်အတွင်းမှာ ပေးတဲ့အလုံးရေ အကုန်ကုန်သွားတော့ ကျွန်တော် မရလိုက်ဘူး။ နောက်နေ့အဲလို နောက်တစ်ခါ အသည်းအသန်အလုအယက် ထပ်လုပ်တော့မှရတယ်... တစ်ယောက်ကို ၂ လုံးထိ reserve လုပ်လို့ရတဲ့အတွက် ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော့သူငယ်ချင်း ဦးရာလူက ၂ လုံး reserve လုပ်မယ်လို့ တိုင်ပင်ပြီးလုပ်လိုက်လို့တော်သေးတယ်... ကျွန်တော်ရလိုက်တော့ တစ်ယောက်တစ်လုံးယူလိုက်ကြတယ်...
Samsung Galaxy S2 နဲ့ Iphone 4s ၂ခုကို ဘယ်ဟာဝယ်ရပါ့ဆိုပြီး ဗျာများနေရာက 4s ရလိုက်တော့ ဒါပဲကိုင်ဖြစ်တော့မှာပေါ့... အဲမှာဝယ်ပြီးမှသိရတာက 4s ရဲ့ Siri က အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်မရရင် အလုပ်မလုပ်တာပါပဲ... ကျွန်တော်က ဒီမှာ ၁ နှစ်နေပြီးရင် ရန်ကုန်ပြန်မလို့တွေးထားတာဆိုတော့ Siri နဲ့ ရန်ကုန် မထော်မနန်းကြီးဖြစ်နေတော့တာပဲဗျာ...
ဒါကျွန်တော့်ဘဝမှာ ပထမဆုံးကိုင်ဖူးတဲ့ Apple product ပါ... အရင်က Nokia 5800XM ထက်တော့ အပုံကြီးသာပြီပေါ့...
စျေးနှုန်းကတော့ 16GB ကို £499 32GB ကို £599 64GB ကိုတော့ £699 ပါတဲ့...
မချမ်းသာတဲ့ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ £499 ဆိုတာ စွန့်စားဝယ်ယူမှုတစ်မျိုးပေါ့ဗျာ...
Galaxy S2 ကို £400 လောက်နဲ့ဝယ်လိုက်တာက ရန်ကုန်မှာသုံးဖို့ ပိုအဆင်ပြေလောက်မယ်လို့တော့ တွေးမိတာပဲ... ခုတော့ 4s က music ပိုကောင်းပါတယ်လေဆိုပြီး စိတ်ဖြေနေရလေရဲ့... 4s က ကောင်းပါတယ်... ဒါပေမယ့် ခုနေ မိုးကြီး မင်းကို £99 အလိုက်ပေးမယ်... Galaxy S2 နဲ့ 4s လဲမလားဆို ဝမ်းသာအားရ လဲပစ်မိမှာပဲ... ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်အဓိက မျှော်လင့်ထားတဲ့ music ပိုင်းမှာ 4s က ရန်ကုန်ကနေ ၃ သောင်းကျော်ပေးဝယ်လာခဲ့တဲ့ sony mp3 player လေးကိုကော ဒီမှာဆွဲထားတဲ့ creative Zen ကိုပါ မမှီလို့ပါပဲ...
1) "လူဆိုတာ ရတာမလို လိုတာမရ"
2) "ကိုယ့်အတွက် တကယ်အသုံးဝင်မယ့်အရာကို ဝယ်ပါ... ပေါ်ပင်နောက်မလိုက်ပါနဲ့"
@moegyi2006, သီချင်းကောင်းကောင်းနားထောင်ချင်တယ်ဆိုရင် apple မှာပါတဲ့ မူရင်း ear phone ကို မသုံးပါနဲ့။ စကာင်္ပူမှာတော့ music ပိုင်း ကို dr dre earphones တွေနဲ့ တွဲသုံးတာ တော်တော် ကောင်းတယ်လို့ ဆိုကြတယ်။ ကျွန်တော် လက်ရှိ သုံးနေတဲ့ earphone က iphone နဲ့ တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ မူရင်း ear phone နဲ့ တခြားစီပါ။ ear phone ဝယ်တဲ့အခါ parking ဖွင့်ပြီးပြီးခြင်း volume ကို အဆုံးထိ တင်ပြီး ဖွင့်ထားပါ။ ခဏလောက် ဖွင့်ပြီးမှ မူရင်း volume နဲ့ အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ သာမာန် ရိုးရိုး ear phone ထက် အသံပိုကြည်လင်ပါတယ်။
iphone4မှာ ပါတဲ့ sound quality က တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ သို့ပေမယ့် မူရင်း speaker ကော ear phone ကော မကောင်းပါ။
ကိုစေတန်ရေ...ဟုတ်ကဲ့ဗျ... earphone ကတော့ ဝယ်ရမှာပဲ... ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ sony တို့ creative တို့က earphone တွေနဲ့နားထောင်တာလည်း ကောင်းပါတယ်... အကြံပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ... earphone ပြောင်းနားထောင်ကြည့်မိပေလို့ဗျ... ကျွန်တော်က ရေချိုးပြီးရင် applestore ပြန်သွားပြီး refund တောင်းမလားတောင် စဉ်းစားနေတာ... :-D
ကြုံတုန်းလေး ဆက်မေးပါရစေဗျ... Amazon တို့ ebay တို့ကနေ ပစ္စည်းဝယ်ရင် အဆင်ပြေလားခင်ဗျ... reliable ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော် အဲဒီကနေ headphone မှာမလားလို့စဉ်းစားထားလို့ပါ...
applestore က headphone တွေတော့တွေ့တယ်... £299 ဆိုတော့ တန်မှန်းမတန်မှန်းမသိတာနဲ့ တစ်ခါတည်း မဝယ်ခဲ့ဘဲ ပြန်လာခဲ့တာ
နောက်တစ်ခုက ringtone ​ပြောင်းတာခင်ဗျ... iphone က m4r format ပဲ သိတယ်ဆိုလို့ ​ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးသွင်းကြည့်တာ မရဘူးခင်ဗျ... ကျွန်တော်ပဲ သေချာမသုံးတတ်သေးလို့လား format အသစ်ပဲ ပြောင်းတောင်းနေလို့လားတော့မသိဘူး... ကျွန်တော် googling လုပ်ရှာတာတော့ iphone 4s ringtone problem ရှင်းထားတာမတွေ့မိလို့ ကူညီပါဦး...
I am using http://itunes.apple.com/sg/app/ringtone-designer-create-unlimited/id382373458?mt=8 , it can convert and make your mp3 to iphone ringtone.
£299 is so much. Before buying the earphone, please check the review first. Amazon is OK but ebay is base on seller.
Card ကတော့ micro SIM ပဲနဲ့တူတယ်။ သူ့ဖုန်းတစ်ခါ၀ယ်သုံးပြီးရင် တခြားဖုန်းတွေထဲကို ထည့်လို့ရမှာမဟုတ်တဲ့အတွက် ၀ယ်ဖို့စိတ်ကူးမရှိပါ။
ကင်မရာကတော့ 8MP ဖြစ်လာတာကောင်းပါတယ်။ ဖြစ်သင်နေတာလဲ ကြာပါပြီ။
@Htet Naing , စင်္ကာပူမှာ iphone ဝယ်တယ်ဆိုရင် micro SIM ကော normal SIM ပါပေးပါတယ်။ iPhone မသုံးပဲ ကြိုက်တဲ့ ဖုန်းနဲ့လည်း သုံးလို့ရပါတယ်။
စင်ကာပူကတော့ တစ်ခေါက်ပဲ ရောက်ဖူးတယ်။ micro SIM ကော normal SIM က နံပါတ်တစ်ခုထဲ ပဲလား။
bill ကရော ​card နှစ်ခုစာ​ေ​ပါင်းပြီးပေးရတာလား။ နစ်ကဒ်စလုံးသုံးရင်ရော ဖုန်းလာရင် နှစ်လုံးစလုံး အသံမီမှာပေါ့။
မြန်မာပြည်ကရောင်းတဲ့ huawei ဖုန်: တွေကရော cdma ဖုန်း​ေ​တွ နိုင်ငံခြား ဖုန်းကဒ်ထည့်ဆက်လို့ရလို့လာဗျား။ normal sim တွေ UIM card ဖုန်းတွေမှ​ာ ထည့်တာ မရဘူးမလား။ လူတွေဘာလို့ ဝယ်သုံးကြလဲ။ ကိုယ်ကြိုက်ရင် ကိုယ်ဝယ်သုံးမှ​ာပဲ။ ပြောင်းပြန် ပြန်စဉ်စားကြည့်ပေါ့။ micro ဖုန်းကဒ် ပြောင်းသုံးချင်ရင် micro sim ရတဲ့ဖုန်း ဝယ်ရသလို။ normal ဖုန်းကဒ် ပြောင်းသုံးချင်ရင် normal sim ရတဲ့ဖုန်း ဝယ်ရတာပဲ။
အကိုတို့ရေ...ကျနော်လဲတခုလောက်မေးချင်တယ်ဗျ....နိုင်ငံခြားကနေ Galaxy ..iphone တို့ဝယ်လာရင်
မြန်မာပြည်ၾမာ ဂျီအက်စ်အမ် နဲ့ ပြန်သုံးလို့ရပါသလားခင်ဗျ...သူငယ်ချင်းတွေ Korea ကနေ ပို့လိုက်တာ
ဟိုမွာ သုံးလို့မရဘူးလို့ပြော နေကြတာ...ဒါကြောင့် ကျနော်လဲ မေးကြည့်တာဗျ...Galaxy s2& Iphone4 က ဘယ်ဟာနဲ့ ပိုအဆင်ပြေမလဲခင်ဗျ....မြန်မာပြည်မာ စျေးနူန်းလေးများ သိရင်ပြောပြပေးကြပါလားခင်ဗျ....သိချင်လို့မေးမိပါ၏...အမွားပါရင်ခွင့်လွတ်ပါ...တောင်းပန်ပါ၏...ဟထိုး မရေးတက်ဘူး....လက်ကွက် မသိ၍
Ba Nyar wrote:
Galaxy s2& Iphone4 က ဘယ်ဟာနဲ့ ပိုအဆင်ပြေမလဲခင်ဗျ....မြန်မာပြည်မာ စျေးနူန်းလေးများ သိရင်ပြောပြပေးကြပါလားခင်ဗျ..
Galaxy s2 used Andriod and Iphone used iOS. Only depends on what you need. Both of them is usable in Myanmar.
p.s. I don't know fees.